Izicathulo ze-Shoelaces - China Abakhiqizi bezicathulo nabaphakeli
Uma uyothenga, uke waqaphela ukuthi izicathulo eziningi zisebenzisa izintambo zezicathulo ukwenza izicathulo zibe semfashinini futhi zikhange. Ngokuvamile, izintambo zezicathulo zinobude obujwayelekile. Ubude bayo bungabuye benziwe ngokwezifiso. Imibala ehlukene, izinqubo ezahlukahlukene nezinto ezahlukahlukene, osayizi basetshenziselwa izintambo zezicathulo, okwenza ivelele. Ngosizo lwezicathulo zezicathulo, izicathulo ziyavelela futhi. Imibala inemibala eqinile., Imibala ehlanganisiwe eboshwe, imibala yothingo, ukukhanya emibala emnyama nemibala yensimbi yensimbi. Yimuphi umbala ongafanelana nezicathulo? Uma izicathulo kuyimidlalo yemfashini, imibala ehlanganisiwe eboshiwe nemibala yothingo ingasetshenziswa. Uma izicathulo zinemibala ejwayelekile, imibala eqinile ingasetshenziswa. Uma lezi zisetshenziselwa ubusuku bokugijima, ukusebenzisa i- "glow in the dark color" kuwumqondo omuhle.Re amalogo, kwesinye isikhathi i-logo ibizophrintwa ezicathulweni kepha kwesinye isikhathi, ilogo ingangezwa ezintanjeni zezicathulo. I-logo ingaba ukuphrinta kwe-silkscreen, ukuphrinta nge-offset, ukuphrinta okwenziwe nge-sublimated, nokwelukiweyo nokunye, phakathi kwayo lapho i-logo ephothiwe ibiza kakhulu. Njengomhlinzeki obalulekile we-Olympic Games neDisney park, ukusikhetha kuzonikeza umbono wakho ojulile ngamanani, ikhwalithi, usuku lokulethwa kanye nensizakalo ehamba phambili yokuthengisa. Xhumana nathi ngokushesha!